» पुरुषलाई मात्र किन लाग्छ हेमोफिलिया रोग ?
पुरुषलाई मात्र किन लाग्छ हेमोफिलिया रोग ?
१३ आश्विन २०७६, सोमबार ०६:४६
हेमोफिलिया महिलाको तुलनामा पुरुषलाई बढी हुन्छ । महिलाहरु यो रोगका सार्नका लागि माध्यमका रुपमा भूमिका खेलेका हुन्छन् । हेमोफिलिया ‘ए’ र‘बी’ गरेर दुई प्रकारको हुन्छ । हेमोफिलिया ‘ए’ र ‘बी’ बाटग्रसित मानिसहरुमा अक्सर अन्य मानिसहरुको तुलनामा लामो समयसम्म रक्तस्राव हुने समस्या देखिन्छ ।
हेमोफिलिया ‘ए’ र ‘बी’ एक्स जिन वा ‘एक्स’ क्रोमोजोमका कारण हुन्छ । महिलामा दुवै क्रोमोजोम एक्स नै हुन्छन् । तर पुरुषमा ‘एक्स’ र ‘वाई’ गरी दुई प्रकारका क्रोमोजोम हुन्छ । महिला र पुरुषको यिनै फरक–फरक क्रोमोजोमका कारण बच्चाको लिङ्ग निर्धारण हुन्छ । क्रोमोजोममा नै हेमोफिलिया पैदा गर्ने खालको जिन हुन्छ ।
महिलामा दुवै एक्स–एक्स क्रोमोजोम भएकाले यिनीहरु यो रोगका वाहकका रुपमा हुन्छन् । अर्थात् छोरामा ‘एक्स’ क्रोमोजोम आमाबाट मिल्ने गर्छ । त्यो ‘एक्स’ क्रोमोजोम हेमोफिलियाबाट ग्रसित छ भने छोरालाई हेमोफिलिया हुन्छ । तर छोरीमा एउटा ‘एक्स’ क्रोमोजोम आमासँग मिल्छ यदि हेमोफिलियाबाट ग्रसित बुवाबाट आउने ‘एक्स’ क्रोमोजोम हेमोफिलियाबाट ग्रसित नभए छोरीमा यो रोग सर्दैन । बुवाबाट बच्चामा यो रोग खासै सर्दैन ।
यो रोग लागेमा शरीरबाट बाहिर बगेको रगत जम्दैन । रगत नजम्ने हुनाले कुनै दुर्घटना हुँदा पनि रगत नजमेर ज्यान जान सक्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार यो रोगका कारण रगतमा प्रोटीनको कमी हुन्छ । यसलाई ‘क्लाँटिक फ्याक्टर’ भनिन्छ ।एस्पिरन वा नन स्टेराइड औषधी खानाले यसबाट बच्न सकिन्छ र यसबाट बच्न हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्छ ।